Ny vokatra hydrogel dia miovaova ary manohana ny famokarana namboarina. Amin'izao fotoana izao, ny tsipika famokarana dia nitarina mba hahitana andiana vokatra hydrogel maro, mety amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny fikolokoloana ny hoditra, ny fitsaboana hozatra famerenana amin'ny laoniny, ary ny fitafian'ny ratra hydrogel, ary afaka manome vahaolana matihanina sy haingana ho an'ny fangatahana famolavolana fampiharana manokana manerantany mpanjifa hydrogel.
Fitaovana novolavolain'ny tena, teknolojia mitarika, vidin'ny orinasa mifaninana. Ny fitaovana rehetra dia novolavolaintsika tanteraka. Ny mpiasa teknika fototra dia manana orana teknolojia an-taonany maro ary manome toky ny kalitaon'ny indostrian'ny hydrogel. Ho fanampin'ny ozinina lehibe ao Suzhou, ny orinasanay mitsivalana dia manambatra rojom-pandrosoana ambony sy ambany any amin'ny tanibe sinoa, mampihena ny vidiny ary mampisy fifaninanana kokoa ny vidin'ny orinasa.
R&D ary fanavaozana. Ny orinasanay dia manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana teknolojia hydrogel manokana, manokana ny R& D sy ny fanavaozana, ary manome vokatra hydrogel avo lenta, azo antoka, azo antoka ary manaparitaka ho an'ny mpiara-miasa mpivarotra ambongadiny eran-tany. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny vokatra sy ny fanavaozana mitohy, izahay dia manampy ireo mpiara-miasa mpivarotra ambongadiny eran-tany hanatsara ny viscosity an'ny mpampiasa farany ary hamorona ekosistema mivoatra ho an'ny vokatra hydrogel.
Hihaona amin'ny ekipa
Tony dia manana traikefa an-taonany maro eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, fikarohana sy fampandrosoana hydrogel, varotra ary fampandrosoana ny tsena anatiny ao Shina. Manana mari-pahaizana klinika avy amin'ny Oniversiten'i Soochow izy. Amin'ny maha-CEO an'ny Hydrocare Tech azy, niaraka tamin'ny traikefa efa an-taonany maro, dia nitarika ny orinasa hitombo tsikelikely izy.
Tompon'antoka amin'ny varotra sy serivisy aorian'ny fivarotana ny vokatra hydrogel, manana traikefa manan-danja amin'ny varotra varotra vahiny, ary liana amin'ny fanatanjahantena ivelany
Andriamatoa Ji dia nirotsaka tamin'ny famolavolana hydrogels nandritra ny roa ambin'ny folo taona, ary somary nalaza teo amin'ny sehatry ny fikarohana sy ny fampandrosoana hydrogel ao Shina, ary nandray anjara tamin'ny famolavolana hydrogels isan-karazany. Tany am-piandohana, tamin'ny andro voalohany dia nitarika ny fampandrosoana ny teknolojia famokarana patch an-trano izy ary noho ny fandraisany anjara dia nitohy niaraka tamin'i Japon ny kalitaon'ny patch patch China.
Mpitantana antoka azo antoka